Girazi Tubes - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
(Total 24 Products for Girazi Tubes)
28.8mm Dhayamita 415mm Kureba Quartz Girazi Tube
Realpoo Optics inogona kupa yakanyanya kunyatsoita quartz chubhu. Magadzirirwo: Zvinyorwa: Quartz Girazi Dhayamita: 28.8mm Kureba: 415mm Pamusoro pemhando: 80/50, 60/40, 40/20, 20/10 Bevel: Inodzivirira bevel pazvinodiwa
EFL12mm aspherical girazi rinobatanidza lens
Kupa Mazano: 50000 per month
Muenzaniso Nha.: M9P0.5-FL12-10
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 10mm...
EFL3.77mm aspherical girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M9P0.5-FL3.77-8
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 8mm...
S16 mhando gomo EFL9.8mm girazi rinokanganisa lens
Muenzaniso Nha.: M9P0.5-FL9.8-16
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 16mm...
M10 EFL11.2 Aspherical girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M10P0.5-FL11.2-8
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 10mm x 0.5mm tambo, 8mm...
EFL4.05mm Aspherical girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M9P0.5-FL4.05-6.5
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 6.5mm...
M14 x 0.5 EFL15.18mm Aspherical girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M14P0.5-FL15.18-8
M14x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Imwe girazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 14mm x 0.5mm tambo, 8mm kureba, ndarira EFL (Inoshanda Focal Kureba): 15.18mm CA (Bvisa Aperture): 9.5 / 9.0mm NA (Numeri Aperture): 0.3
EFL 9.8mm 2-Elements girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M9P0.5-FL9.8-10
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Maviri magirazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Zvinhu zviviri; Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 10mm kureba, ndarira EFL (Inobudirira Focal Kureba): 9.8mm CA (Bvisa Aperture): 5mm SD (Diode kune lens): 6.5mm
EFL6.5mm 2-Elements girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M9P0.5-FL6.5-8
M9x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, Maviri magirazi lens dhizaini. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Zvinhu zviviri; Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 8mm kureba, ndarira EFL (Inoshanda Focal Kureba): 6.5mm CA (Bvisa Aperture): 5mm SD (Diode kune lens): 2.5mm
EFL 8mm Aspherical girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M9P0.5-FL8-8-CA3.7
EFL 6.2mm Aspherical girazi rinobatanidza lens
Muenzaniso Nha.: M8P0.5-FL6.2-8
M8x0.5 mm yakashongedzwa dzimba, imwe girazi lens dhizaini. Iyi imwechete lenzi inopa kwakatenderedza 15-20% kuwedzera mune zvinobuda zvichienzaniswa ne3-element lenses ine kudzikiswa kwemhando yedanda. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 8mm x 0.5mm tambo, 8mm...
G8 mhando yakakwira aperture hombe collimating girazi lens
Muenzaniso Nha.: RP-000231
G8 lens ndeyehurefu hwakatarisa hwakareba imwechete chinhu girazi lens ine Broadband AR 400-700nm yekupfeka. G8 lens ine 90% yekupasa kushanda. G8 lens yakanakira kucheka laser. Magadzirirwo: Lens Chinyorwa: Chinhu chimwe chete. Coated Manyiminya girazi Lens Holder: 9mm x 0.5mm tambo, 10mm kureba, ndarira EFL...
Muenzaniso Nha.: AS-D6.33FL4.05
Realpoo Optics inopa yemhando yepamusoro girazi rakaumbwa aspheric lens. Uye isu tinogona kupa mutengo wakanaka uye nekukurumidza kutumira. Chigadzirwa Chigadzirwa: Aspheric Lens Dhayamita: 6.33mm Yakareba Kureba: 4.05mm Center Ukobvu: 3.3mm Nhamba yekuvhura NA: 0.6
12.7mm Quartz 45 ° inoratidzira girazi ye laser
Muenzaniso Nha.: RP-SF001
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivha kana yealuminium firimu kana dielectric firimu kumashure kwegirazi rekuona nekupenda kwekuvhara. Chigadzirwa Chigadzirwa: 45degree YAG Reflector Mirror Dhayamita: 12.7mm Ukobvu: 4mm Chinyorwa: Quartz Wavelength: 1064nm
20mm Quartz 45 ° inoratidzira girazi
Muenzaniso Nha.: RP-DKK20
Iyo inoratidzira chinhu chekupenya chinoratidza chiitiko chechiedza nekupfekedza simbi yesirivha kana aluminium firimu kana dielectric firimu kuseri kwegirazi rekuona nekuvhara kwekutsiva. Chigadzirwa Chigadzirwa: 45degree YAG Reflector Mirror Dhayamita: 20mm Ukobvu: 4mm Chinyorwa: Quartz Wavelength: 1064nm
Girazi Tubes Girazi Tube Girazi Sefa Girazi Laser Girazi Rod Quartz Tube Magirazi eLaser Aspheric Girazi Lens